Ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny fampiasana tsimokaretina trigger amin'ny hetsika isan-karazany dia hanaporofo fa mpanafaingana ny fitomboana lehibe mandritra ny vanim-potoana vinavina 2021-2031. Trigger sprayers dia ampiasaina amin'ny famafazana karazana ranon-javatra samihafa. Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny plastika polypropylène (PP) izy ireo. Ny...
Trigger Sprayer Market: Overview
Araka ny tatitra farany momba ny tsena navoakan'ny Transparency Market Research momba ny tsenan'ny trigger sprayer ho an'ny vanim-potoana 2021–2031 (izay ny 2021 ka hatramin'ny 2031 no vanim-potoana vinavina ary 2020 no taona fototra), ny areti-mifindra COVID-19 dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra. tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny trigger...
Fandinihana sy fifanakalozan-kevitra momba ny tontolo iainana
Te hiresaka momba ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny aho. Ho an'ny olon-tsotra dia niova tsikelikely ny fahatsiarovan-tena momba ny fiarovana ny tontolo iainana, avy amin'ny malemy ho mora. miantso...